मंचमै किन रिसाए नारायणकाजी श्रेष्ठ? - Nepal Readers
Home » मंचमै किन रिसाए नारायणकाजी श्रेष्ठ?
प्रतिनिधिसभा बिघटनविरुद्ध शुक्रवार नेकपाको बहुमत पक्षले गरेको कार्यक्रम उसले सोचेभन्दा बढी सफल देखियो। तर, शनिवार सामाजिक संजालमा सोही सभाको मंचमा बसेका नेकपा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ रिसाएको भिडियो खासगरी ओली खेमाका नेता कार्यकर्ताहरूले व्यापक रूपमा स्यर गरे। आवाजविनाको त्यस भिडियोमा नेता प्रकाश रिसाइरहेको देख्न सकिन्छ। नेताहरू माधव नेपाल, पम्फा भुसाल र लिलामणीको भावभंगी हेर्दा कुनै विषयमा उनीहरूबीच गम्भीर मतभेद परेको बुझ्न सकिन्छ ।
तर सो भिडियोलाई सामाजिक संजालमा स्यर गर्नेहरूले कुर्सीमा बस्न नपाएकोले उनीहरूबीच झगडा परेको अर्थ लगाए। सामाजिक संजालमा व्यक्त भएको शंकाजस्तै उनीहरूबीच कुर्सीका विषयमा झगडा परेको हो त? होइन। खासमा कुरो अर्कै हो ।
नेकपाका प्रवक्ता प्रकाश आन्दोलन संघर्ष समितिका संयोजक पनि हुन् । र, सो सभाका अध्यक्षसमेत थिए श्रेष्ठ । कार्यक्रममा सोचेभन्दा बढी नेता कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति भएका कारण भीड व्यवस्थापन गन्जागोल बनेपछि प्रकाश रिसाएको स्रोतले बताएको छ । केन्द्रीय संघर्ष समितिको सहसंयोजक समेत रहनुभएकी स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसालले भन्नुभयो, ‘भिडियो हेर्दा ठूलै विवाद भएजस्तो लाग्छ तर कार्यक्रम व्यवस्थापनसम्बन्धी सामान्य असहमती भएको र त्यसमा छलफल भएको हो।’
शुक्रवारको प्रदर्शनलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि संघर्ष समितिले उपत्यकाका बिभिन्न १० स्थान तोकेर जुलुसको रुट तय गरेको तर सहभागीको संख्या धेरै हुँदा जुलुस अस्तव्यस्तपूर्ण बनेको थियो । त्यसपछि श्रेष्ठसँगको छलफल र सहमतिबिना नै जुलुस सभास्थल पुगेपछि संयोजक प्रकाश झोक्किएको स्रोतले बतायो ।
रत्नपार्कबाट बागबजार, पुतलीसडक, प्रदर्शनीमार्ग, शहीदगेट, न्यूरोड गेट हुँदै रत्नपार्क घुमेर सभामा जाने कुरा थियो,तर अध्यक्ष प्रचण्ड बागबजार, पुतलीसडक, प्रदर्शनीमार्ग हुँदै सीधै मन्चमा आए भने माधव नेपाल सुर्खेतबाट काठमाडौं आउँदा ढिला भएकाले बिमानस्थल उत्रेर सिधै कार्यक्रमस्थलतर्फ पसेका थिए ।
सबै सडक भरिरभराउ भएको अवस्थामा निर्धारित रुटअनुसार जुलुस अघि बढ्दा अस्तव्यस्त र भद्रगोल हुने अवस्था आएपछि नारायणकाजी रिसाएका थिए । त्यसमाथि कार्यक्रम निर्धारित समयभन्दा ढिलो सुरु भएका कारण सहभागीहरूलाई घर फर्काउन नसकिएला भन्ने चिन्ता पनि भयो । सोही कारण नारायणकाजी श्रेष्ठ मंचमै कड्केका हुन् ।
सहसंयोजक भुसालले भन्नुभयो, ‘कार्यक्रमको अध्यक्ष नारायणकाजी कमरेडलाई सोधेरै शुरु गरौं कि के गर्ने भन्न खोजेको पनि हो,तर भीडभाडको कारण उहाँको फोन लागेन । पछि उहाँले पनि परिस्थिति बुझ्नुभयो । अहिले बाहिर भनिएजस्तो केही समस्या छैन ।’
मंचमा आफू रिसाएको बारे नेता नारायणकाजीले समेत फेसबुकमा प्रष्ट पारिसकेका छन्। उनले लेखेका छन्ःप्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक एवं प्रतिगामी कदमका बिरुध्द हाम्रो पार्टीद्वारा हिजो राजधानीमा आयोजित बिरोध प्रदर्शन तथा सभा बिशाल जनसहभागिता सहित भव्यरुपमा सफल भयो। छिट्टै अर्को चरणको संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरिनेछ ।
केपी ओलीजी सँगको शुरुदेखिको हाम्रो एउटा मुख्य मतभेद विधि र पध्दतिको पालनामा हो।अब हामीले पार्टी निर्माण र परिचालनमा प्रारम्भदेखि नै पध्दतिसम्मत ढङ्गले अघि बढ्न ध्यान दिनु पर्दछ।त्यसको निम्ति संघर्ष गर्नुपर्दछ । तबमात्र हामी आफ्नो प्रतिबध्दताप्रति इमान्दार हुन सक्दछौं र पार्टीलाई सही दिशामा अघि बढाउन सक्षम हुनेछौं ।हाम्रो हिजोको कार्यक्रमको क्रममा मञ्चमा देखिएको विवाद यही बिषयमा हो ।
जुलुस परिक्रमा र सभा शुरु गर्ने सम्बन्धमा केन्द्रीय संघर्ष समितिले बनाएको पुर्व निर्धारित योजना संघर्ष समितिको जानकारीबिना नै अकस्मात् परिवर्तन गरियो ।त्यसो गरिनु हुँदैनथियो । संस्थागत कार्य प्रणालीको बारेमा सबै नेतृत्वदायी कमरेडहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षणका लागि त्यतिबेला नै जोडले कुरा उठाउनु जरुरी थियो। विधि पध्दतिको उपेक्षा र अवज्ञा हुन नपाओस भन्नेमा हामीले शुरुदेखि सशक्त संघर्ष गर्नु पर्दछ । ख्याल गरौं, हाम्रो अवको एउटा मुख्य चुनौति हिजो हामीले कुरा उठाए अनुसार बिधि पध्दति अनुसार पार्टी सञ्चालन गर्नु हो ।